NukeCoin စျေး - အွန်လိုင်း NUKE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NukeCoin (NUKE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NukeCoin (NUKE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NukeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NukeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NukeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NukeCoinNUKE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00156NukeCoinNUKE သို့ ယူရိုEUR€0.00132NukeCoinNUKE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00119NukeCoinNUKE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00142NukeCoinNUKE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0138NukeCoinNUKE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0098NukeCoinNUKE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0344NukeCoinNUKE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00579NukeCoinNUKE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00206NukeCoinNUKE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00217NukeCoinNUKE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0348NukeCoinNUKE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0121NukeCoinNUKE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00847NukeCoinNUKE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.117NukeCoinNUKE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.262NukeCoinNUKE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00214NukeCoinNUKE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00237NukeCoinNUKE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0484NukeCoinNUKE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0108NukeCoinNUKE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.166NukeCoinNUKE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.84NukeCoinNUKE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.599NukeCoinNUKE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.114NukeCoinNUKE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0429
NukeCoinNUKE သို့ BitcoinBTC0.0000001 NukeCoinNUKE သို့ EthereumETH0.000004 NukeCoinNUKE သို့ LitecoinLTC0.00003 NukeCoinNUKE သို့ DigitalCashDASH0.00002 NukeCoinNUKE သို့ MoneroXMR0.00002 NukeCoinNUKE သို့ NxtNXT0.121 NukeCoinNUKE သို့ Ethereum ClassicETC0.00023 NukeCoinNUKE သို့ DogecoinDOGE0.449 NukeCoinNUKE သို့ ZCashZEC0.00002 NukeCoinNUKE သို့ BitsharesBTS0.048 NukeCoinNUKE သို့ DigiByteDGB0.0498 NukeCoinNUKE သို့ RippleXRP0.00553 NukeCoinNUKE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00005 NukeCoinNUKE သို့ PeerCoinPPC0.00517 NukeCoinNUKE သို့ CraigsCoinCRAIG0.71 NukeCoinNUKE သို့ BitstakeXBS0.0664 NukeCoinNUKE သို့ PayCoinXPY0.0272 NukeCoinNUKE သို့ ProsperCoinPRC0.195 NukeCoinNUKE သို့ YbCoinYBC0.0000008 NukeCoinNUKE သို့ DarkKushDANK0.5 NukeCoinNUKE သို့ GiveCoinGIVE3.37 NukeCoinNUKE သို့ KoboCoinKOBO0.355 NukeCoinNUKE သို့ DarkTokenDT0.00143 NukeCoinNUKE သို့ CETUS CoinCETI4.5
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 10:35:02 +0000.